नेपाल आज | पाकिस्तानमा इमरानविरुद्ध विद्यार्थीकाे संघर्ष, नेतृत्व परिवर्तनकाे तयारी
काठमाडाैँ – घरेलु, विदेशी र आर्थिक संकटका बीच प्रधानमन्त्री इमरान खानले जुलाई २०१८ को चुनाव पूर्वका उनका समर्थक-विद्यार्थीहरूको विरोध जुलुसहरूको सामना गर्नु परेको थियो । लगभग 15 दिने आज़ादी मार्चको असफलतामा उनलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरे।
विद्यार्थी एक्शन कमेटी (एसएसी) द्वारा आयोजित विद्यार्थीहरूकाे विराेध जुलुस सन् २०१८ नोभेम्बर २९ मा पाकिस्तानको ५० वटा सहरमा एकसाथ आयोजना गरिएको थियो। उनीहरूले विद्यार्थी युनियनहरूमा ३५ बर्षे पुरानो प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको एक लामाे सूची दिएका थिएत्यो प्रतिबन्ध सन् १९८४ तत्कालीन प्रमुख मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर-सह-राष्ट्रपति जनरल जियाउल हकले सम्भवतः जमात-ए-इस्लामीको दबाबमा लगाएका थिए । जसको विद्यार्थी शाखा इस्लामी जमियत तुल्बा (आईजेटी) धर्मनिरपेक्ष समर्थक विद्यार्थी संघहरुमा सहज थिएन।
आईजेटीका गतिविधिहरूको स्पष्ट सन्दर्भमा, एसएसीले धार्मिक ठगलाई क्याम्पबाट निर्मूल पार्ने र शान्तिपूर्ण, स्वस्थ र लोकतान्त्रिक वातावरण सृजना गर्न माग गरेकाे थियाे। सन् २०१८ नोभेम्बर २४ मा लाहोर स्टूडेंट एक्शन कमेटीको प्रेस सम्मेलनले विद्यार्थीहरूलाई तीन प्रकारका दमनको सामना गरिरहेको संकेत दिएकाे थियाे:
१. सुरक्षा बल विश्वविद्यालयहरुमा संलग्न,
२. धार्मिक सतर्कता र,
३)विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा राजनीतिमा भाग लिने छैनन भनेर शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्दै।
यूनियनहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुका साथै विद्यार्थीहरूको मागमा बजेटमा कटौती रोक्ने, शुल्क बढाउन रोक्ने र शिक्षाको निजीकरण गर्ने काम पनि गरिएको छ। विद्यार्थी निर्णय लिने प्रक्रियाकाे एक हिस्सा बन्न चाहन्छन् जुन उनीहरूकाे शैक्षिक भविष्यकाे फैसला गर्न सकाेस।गत वर्ष उनीहरूले अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थी र गरिब परिवारबाट आउने विद्यार्थीलाई राहत दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यस्तो देखिन्छ कि विद्यार्थी एक्शन कमेटीले वामपथंलाई पुनर्जीवित गरेर र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै धार्मिक अस्पष्टता र सैनिकलाई चुनौती दिने लक्ष्य राखेको छ। पाकिस्तानी अखबारहरूले वामपन्थी, मानव अधिकार संगठन, वकिल र राजनीतिज्ञहरूले यस आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। पंजाब विश्वविद्यालय स्नातक आरोज अरन्जेब उनको वामपन्थी भाषणको लागि प्रख्यात भएको छ। उनको क्रान्तिकारी कवि बिस्मिल अजीमाबादीको लय दोहोरिएको भिडियोले देशको वामपन्थी राजनीतिमा भएको बहसलाई थाल्यो र उनलाई प्रतिरोध र विद्यार्थीको अधिकारको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
लाहौर वाम मोर्चाका संयोजक र वामपन्थी अनलाइन उर्दू प्रकाशन “जेद्दोजेहाद” (सघंर्ष) का सम्पादक फारूक तारिकले भने, “सबै वामपन्थी मार्चमा (नोभेम्बर २९) का हिस्सा हुनेछन्। विद्यार्थी एकता मार्चमा लाहौरको क्रान्तिकारी इतिहासको नयाँ अध्याय देखिएकाे थियाे। जसले हामीलाई "वामपन्थी कहाँ छ," भनेर साेधेका थिए उनीहरूलाइ नोभेम्बर २९ मा बाेलाएका थियाैँ।
तर वामपन्थवादमा धेरै तनावले विद्यार्थी एकतालाइ हानी हानि पुर्‍याउन सक्छ। जुन उनीहरूले नोभेम्बर २९ मा प्रदर्शन गरेका थिए। किस्तानमा कॉलेज र विश्वविद्यालयका अधिकांश छात्र सरकारी स्कूल तथा मदरसका पूर्व छात्र छन्।
पछिल्लाे ३५ वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थी संघ तथा छात्राहरूमाथिकाे प्रतिबन्ध कारण धेरै संघर्ष गरियाे।छात्रहरू लिंग भेदभाव र उत्पीडनकाे मुद्दालाइ लिएर अग्रणी भूमिका निभाइरहेका छन्।
क्लोज सर्किट टिभी (सीसीटीभी) को प्रावधानको उपयोग विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले विशेष गरी केटीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। नोभेम्बर २५ को बिहानको एउटा लेखमा भनिएको छ कि विश्वविद्यालयका स्टाफले विद्यार्थीहरूलाई यौन उत्पीडन र ब्ल्याकमेल गर्नका लागि सीसीटीभी क्यामेरा फुटेजको दुरुपयोग गरेका थिए। बलुचिस्तान विश्वविद्यालय, जहाँ विद्यार्थीहरूलाइ सुरक्षाको नाममा निरन्तर निगरानीमा राख्ने गरिएकाे छ।
पाकिस्तानमा विशेष गरी मजदुरहरू, मानवअधिकार संगठनहरू, वकिलहरू र सञ्चारमाध्यमहरू छन् जसले विद्यार्थीहरू अाफ्नाे भविष्यका लागि विद्रोह गरिरहेका हेर्छन्। यसकारण इमरान खानको पीटीआई सरकारले देश चलाउन अयोग्य साबित भएको भयाे। र विपक्षी दलहरू चुनौतीकाे सामना गर्नकाे लागि लागी सुस्त भए साथै यसको नेता मौलाना फजलुर रहमानको नेतृत्वमा जमिअत-उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) को अत्यधिक प्रचारित "आजादी मार्च" ले यो कुरा प्रमाणित गर्‍यो। इमरानले राजीनामा नगरेसम्म उनले मार्च जारी रहेको घोषणा गरेका थिए। मार्च -15 दिन मा समाप्त भयो इमरान सत्तामा रहेका छन्, पहिले जस्तो असक्षम छन् उनी।
यदि सेनाले हस्तक्षेप गर्दैन भने विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानलाई ताजा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छन्। नोभेम्बर २९ का जुलुसहरूले यो आशालाई प्रेरणा दिएका छन्, पाकिस्तान अखबारले भनेका छन्।